Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Uneminyaka eli-18 ubudala ukuba asebenze njengeNxusa lasePort Canaveral elitsha
uhambo ngomoya • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
LR - UMkomishinala weGunya leZibuko laseKana Robob Hattaway kunye noJessica Maxwell, kwiNxusa lasePort Canaveral. Ngobubele uKana Port Port Authority
Kwintlanganiso ka-Agasti yeBhodi yeeKomishinala yeeKomishoni zeZibuko laseKana, uMkhomishinala waseBhayi uRobyn Hattaway wabhengeza ukuqeshwa komfundi ophumelele iSikolo samaBanga aPhakamileyo iRockledge uJessica Maxwell njengeNxusa lasePort Canaveral ukuba asebenze njengommeli kaKhomishinala uHattaway kuluntu lwezibuko. UJessica ngu-Commissioner u-Hattaway owonyulwa okokuqala kwi-Port Ambassador, kwaye eneminyaka eyi-18, ngoyena mntu mncinci ukuba asebenze njengommeli we-CPA Board of Commissioner.
Umkomishinala ngamnye waseKanaveral Port Authority angatyumba abantu ababini ukuya kusebenza njengommeli woMkomishinala kuluntu lwezibuko.
Abameli bePort bazibandakanya noluntu ukukhuthaza ukuqonda okukhulu ngendima yePort Canaveral kulo mmandla.
Bonyusa nokwazisa koluntu kunye nokuqonda izicwangciso zesicwangciso seCanagement Port.
"Njengamagosa ePort, kufuneka sijonge kubasebenzi bethu bexesha elizayo kwaye silungiselele isizukulwana esilandelayo ukuba sikhokele," utshilo uMkomishinala uHattaway. “UJessica unemincili yokufunda nokwabelana ngombono wethu nesizukulwana sakhe. Ndiyathemba ukuba nizakundijoyina xa ndamkela indima yakhe entsha njengeNxusa laseBhayi. ”
NjengoNozakuzaku weZibuko, uJessica uza kuncedisa uMkomishinala uHattaway ngenkqubo ye-Port yase-Port yase-Junior ukuba abelane ngolwazi analo ngenkqubo ye-HELM, ejolise ekwakheni ubudlelwane nokwandisa ulwazi loluntu kunye nenkxaso yemisebenzi ephambili ye-Port kulutsha kuluntu.
Njengomfundi kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo iRockledge, uJessica uthathe inxaxheba kwesi sikolo Ukunceda ukufundisa iinkokeli kulwandle (HELM) inkqubo. Usebenze njengoMlawuli weBattalion kwiRockledge High School ROTC. I-equestrian esebenzayo, icebo likaJessica emva kokuthweswa isidanga sokuya emkhosini wamanzi wase-US laphazamiseka emva kwengozi yokukhwela ihashe ityhila ukuba unesifo se-osteosarcoma, umhlaza wamathambo obangele ukulahleka kwengalo enye ngaphambi kokuba unyaka uphume.
EPort CanaveralEFlorida, isango lokuhamba ngenqanawa kunye nokuzonwabisa kunye nemithwalo kunye nolungiselelo. Kudala yahlukaniswa njengendawo yokungena kwimida emitsha kuhambo lwasemajukujukwini. I-Port Canaveral ibamba phantse i-5 yezigidi zabahambi ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa ngokusebenzisa iiterminal zayo zobugcisa kunye nezigidi ezi-6 zeetoni zemithwalo minyaka le.
Ezokhenketho noLonwabo ePort Canaveral
EPort CanaveralIindwendwe zinokufumana uvuyo lokuphehlelelwa kwerokethi ngelixa ilanga elunxwemeni. ICove yindawo yolonwabo engasemanzini ePort Canaveral eneevenkile zokutyela, iialounge, iivenkile, izikhephe zokuqesha kunye nenqanawa yekhasino. Iindawo zokutyela ezininzi zeCove zineetafile zangaphandle kunye nemivalo ye-tiki, iindawo ezintle zokubukela iinqanawa zokuhamba ngenqanawa zihamba okanye ziyonwabele nje impepho engaselunxwemeni. Xa ilanga litshona, kukho ii-DJs, amaqela aphilayo, ukudanisa, kunye nekaraoke, oh kunye neenkampu.